दुइ क्लास पढ्ने जस्मिनले कालेबुङ जिल्ला शासकलाई भनिन्-‘म बङ्गला पढ्न चाहँदिन’ – खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङदुइ क्लास पढ्ने जस्मिनले कालेबुङ जिल्ला शासकलाई भनिन्-‘म बङ्गला पढ्न चाहँदिन’
दुइ क्लास पढ्ने जस्मिनले कालेबुङ जिल्ला शासकलाई भनिन्-‘म बङ्गला पढ्न चाहँदिन’
June 3, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
कालेबुङ,3जुन 2017
जस्मिनल लेखेको पत्र
कालेबुङ सेन्ट फिलोमिनाकी दोस्रो श्रेणीका विद्यार्थी जस्मिन तिग्गा स्कूलमा आएको बङ्गला किताब पढ्न चाहदिँनन्।
उनले आफ्नो यो इच्छा जाहेर गर्दै कालबुङ जिल्ला प्रशासकलाई पत्र लेखेकी छन्।
जहाँ भनिएको छ,-‘मेरो स्कूलमा बङ्गला किताब बाँड्न थालेको छ। म बङ्गला भाषा पढ्न चाहन्न। यसकारण मलाई मन पर्ने भाषामा पढ्न दियाजावोस भनी निवदन गर्दछु।’
जस्मिनको त्यो चिठ्ठी अहिले सोसल मिडियामा भाइरल छ।
जिल्ला दार्जीलिङकी जिल्लापाल जोयशी दासगुप्तले भनेकी थिइन्, ‘स्कूल अनि कलेज बन्दको विरोधमा अवश्यै कार्वाही गरिनेछ, जसको लागि अदालतको नियम पनि हेरिनेछ। दार्जीलिङ पहाड़का विद्यालयहरुमा नेपाली भाषालाई हटाएर बङ्गला भाषा थोप्ने राज्य सरकारको कुनै मनसाय छैन।’
तर कालेबुङको सेन्ट फिलोमिनामा भने निःशुल्क बङ्गला किताब वितरण भइरहेको जस्मिनले कालेबुङ जिल्ला शासकलाई लेखेको पत्रमा स्पष्ट छ।
केही महिना अघि जीटीए शिक्षा विभागले बङ्गालको शिक्षा विभागले पठाएको बङ्गला भाषाको पाठ्य पुस्तक प्राथमिक, एसएसके स्कूलहरूमा वितरण गरिरहेको थियो। यस अघि ती पाठ्य पुस्तकहरू नेपालीमा नै आउँथ्यो, तर यसपल्ट भने सरकारीरूपमा आउने ‘भाषा’-को किताब ‘बङ्गला’-मा आएको छ।
अघि नेपालीमा आउने पाठ्य पुस्तक यसपल्ट किन बङ्गला-मा आयो? यसको पछिल्तिर कुन अभीष्ट लुकेको छ, यसबारे राजनैतिकलगायत जम्मै बौद्धिक समाज मौन बस्यो।
गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाले त्यसबेला मिडियामार्फत पाठ्यपुस्तकमार्फत बङ्गाल सरकारले कुनै कुनै कुटनीति गरिरहेको हुनसक्ने शङ्का गर्दै त्यसको विरोध गरेको थियो। त्यसबेला पनि जीटीएले कसरी बङ्गला पाठ्यपुस्तक वितरण भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। यसलाई कसैले पनि गम्भीरतासित नलिएकोले कुरा विस्तारै सेलाइसकेको थियो।
खबरम्यागजिनले जीटीए शिक्षा विभागका सभासद् रोशन गिरीलाई प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘सधैँ नेपाली पाठ्यपुस्तक आउँथ्यो, यसपालि बङ्गला पाठ्यपुस्तक आएको थाहा पाउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। अहिले बङ्गला पाठ्यपुस्तक बाँडिएको छैन।’
पाठ्यपुस्तकको मुद्दा सेलाउन नपाउँदै मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले 2018 देखि बङ्गला भाषालाई राज्यभरि बाध्यात्मक गर्ने बताइसकेकी छन्, जसको प्रतिवादमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सडकमा उत्रिएको छ।
यसैबिच सन्त फिलोमिनामा वितरण गरिएको बङ्गला भाषाको पाठ्यपुस्तक नपढेर ‘आफूलाई मनपरेको भाषामानै पढ्छु’ भन्दै सात वर्षीय जस्मिन तिग्गाले कालेबुङ जिल्ला शासकलाई पत्र लेखेर सबैलाई छक्क पारदिएकी छन्।
जस्मिनका बाबा पारङ्गत तिग्गाले खबरम्यागजिनसित भने,-
‘केहीदिन अघि म कालेबुङ जिल्ला शासकको कार्यालय जस्मिनलाई लिएर गएको थिएँ। भाग्यवस महकुमा शासक पनि उनीसितै थिए। जस्मिनले बङ्गला भाषामा आएको किताब नपढ्ने भनेर लेखेको पत्र जिल्ला शासकलाई दिनु थियो। जस्मिनले अघिबाटै पहिलो भाषा अङ्ग्रेजी र दोस्रो भाषा नेपाली पढ्दै आइरहेकी छन्। मैले कुमुदिनीमा बङ्गला भाषा अस्पनल-कोरूपमा पढेको थिएँ। जस्मिनले बाध्यात्मक-रूपमा पढ्नुपरिरहेको छ। यो मलाई ठीक लागेन।
जिल्ला शासकले जस्मिनको पत्रको प्रतिलिपी राखे। मैले ‘रिसिभ’ चाहीँ गराइन। मसित जिल्ला शासकले तीनघन्टाको समय मागे अनि कार्यालय बोलाए। उनले जस्मिनले बङ्गला-भाषाको किताब बाध्यात्मकरूपमा पढ्न नपर्ने बताए। मैले सोधेको थिएँ, ‘जस्मिनले अङ्ग्रेजी र नेपाली पाठ्यपुस्तक चाँही किन निःशुल्क पाउँदैन र यसपल्ट बङ्गला चाँही किन निःशुल्क आयो?’
उनले उप्रान्त जस्मिनलाई मनपरेको भाषा नेपालीको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क जीटीएमार्फत पाउने बताएपछि हामी फर्कियौँ।’
पारङ्गत तिग्गा आफै चाँही आदिवासी हुन्। कालेबुङको मङ्गल डाँडाबस्ने तिग्गाले नेपाली भाषी बिहे गरेका छन्। कुमुदिनीमा उनले नेपाली नै पढे। ‘मलाई नेपाली नै आउँछ, यो मलाई मन परेको भाषा हो,’ पारङ्गतले भने, ‘मैले त इच्छाले बङ्गला पढेँ, ‘छोरीले किन बाध्य भएर पढ्नु?’
किन हिंसा हुनसक्छ पहाडमा? बताए विनय तामाङले
गोजमुमोको पत्रले असमञ्जसमा विपक्षीहरूः कसको के छ भनाई?